ओमकार टाइम्स धेरै महिला पुरुषले भोग्ने तीन यौन समस्या र समाधान – OMKARTIMES
म ३० वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । हप्तामा दुई पटक श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क राख्छु । यौन सम्पर्कका बेला मेरो वीर्य चाँडै स्खलन हुने गरेको छ । श्रीमती बेलाबेलामा झर्किने गर्छिन् । यौन सम्पर्कको अवधि कति हुनुपर्ने हो ? शीघ्र पतन रोक्ने केही उपाय बताइदिनुभए आभारी हुने थिएँ । सि
म २५ वर्षीय युवा हुँ । सम्भोगको इच्छा हुँदाहुँदै पनि सेक्स गर्न सक्दिनँ । मेरो लिंग कडा नै हुँदैन । तीन वर्षदेखि मलाई यो समस्या भएको हो । गर्लफ्रेन्डसँग सम्बन्ध नै तोडिदिऊँ जस्तो भएको छ । म के गरूँ ? आर
मेरो श्रीमान् ३९ वर्षको हुनुहुन्छ । म २८ वर्षकी छु । हाम्रो बिहे भएको पाँच वर्ष भयो । हामी सुखी थियौँ । तर, अहिले उहाँ असाध्यै पिउनुहुन्छ । एक वर्षदेखि उहाँले मलाई यौनसुख दिन सक्नुभएको छैन । उहाँमा यौनचाहना नै छैन । कहिलेकाहीँ कोसिस गर्नुहुन्छ तर उहाँको लिंग उत्तेजित नै हुँदैन । केही सीप नलागेपछि त्यत्तिकै सुत्नुहुन्छ । आजभोलि त मलाई झर्को लाग्ने, सानो सानो कुरामा रिस उठ्ने हुन्छ । अझ बेलुका व्यर्थको कोसिस गर्दा म कराइदिन्छु । के गर्ने होला ? उहाँको उपचार हुन सक्ला ? के